အသက်၄၀ အရွယ်တွင် အရေးအကြောင်းများဖြစ်ခြင်း နှင့် အရေပြားတွဲခြင်းကို ရပ်တန့်စေခြင်း - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
အသက်၄၀ အရွယ်တွင် အရေးအကြောင်းများဖြစ်ခြင်း နှင့် အရေပြားတွဲခြင်းကို ရပ်တန့်စေခြင်း
နိုဝင်ဘာ 29, 2018 Noppadol Amornpinyokeit, M.D.
Focused ultrasound သို့မဟုတ် DermoLift လုပ်ထုံး၊ Botulinum ထိုးခြင်း နှင့် filler ထိုးခြင်းတို့ ဖြင့် ဆက်စပ်နေသော ရေဒီယိုလှိုင်း နည်းပညာ အားဖြင့် အရေးအကြောင်းများကို သိသာစွာ လျော့ပါးစေနိုင်သည်။
အသက် ၅၀ ကျော်လာပါက ကိုယ်ခန္ဓာ၏အရိုးငြမ်းဖွဲ့စည်းပုံမှာ သဘာဝအတိုင်းစတင်ယိုယွင်းလာပါပြီ။ collagen နှင့် elastin တို့မှာ ယခင်ထက် ပမာဏ လျော့နည်းလာပြီးအရေးအကြောင်းပိုမိုဖြစ်စေပါသည်။ ဤအဆင့်တွင်Botulinum ထိုးခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် အသားအရေပြန်လည်ပင့်တင်တင်းရင်းစေရန်မလုံလောက်တော့ပါ။ အရေပြား၏အတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုအားဖြည့်ပေးရန်အထိရောက် ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည့်’volume lift’ နည်းပညာကို အသုံးပြုသော filler ကိုပါ ထိုးသင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရေပြားမှာချောမွေ့တင်းရင်းပြီးနုပျိုဟန်ရှိစေရန်ဖိုင်ဘာအမျှင်မြောက်များစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။သို့သော်အသက်ကြီးရင့်လာခြင်းအပြင်စားသောက်မှုပုံစံ၊ နေရောင်ခြည်၊ စိတ်ဖိစီးမှု နှင့် မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း အပေါ်မူတည်ပြီး အရေပြားပျက်စီးယိုယွင်းလာပါသည်။ ထိုမှတဆင့်အရေးအကြောင်းများ (အချို့မှာအပေါ်ယံသာမဟုတ်) ၊ အရေပြားတွဲခြင်းနှင့်ချွေးပေါက်ကျယ်ခြ င်းတို့ဖြစ်လာသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ collagen နှင့် elastin တို့ လျော့ကျလာခြင်း၊ အဆီတစ်ရှူးများလျော့တွဲလာခြင်း၊အရွတ်များကျုံ့ဆန့်နိုင်မှုလျော့နည်းလာခြင်း နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အရိုးငြမ်းဖွဲ့စည်းပုံသဘာဝအတိုင်းယိုယွင်းလာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။မျက်နှာအမူအရာကြောင့်လည်းထိုသို့ဖြစ်စေနိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ပြုံးခြင်း၊ရယ်ခြင်း၊မျက်မှောင်ကျုံ့ခြင်းနှင့်မျက်ခုံးပင့်ခြင်းကဲ့သို့သောအမူအယာများမှာအရွယ်မတိုင်မီအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းနှင့် အရေးအကြောင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည်။
အိုမင်းရင့်ရော်မှုလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာသည်အထိစောင့်နေခြင်း သို့မဟုတ်ထိုလက္ခဏာများဖြစ်လာပြီးမှ ကုသမှုနည်းလမ်း ရှာမည့်အစား ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက အသားအရေကိုဂရုစိုက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရေပြားဆဲလ်များမှာ အပြည့်အဝပြန်လည်ပြည့်တင်းခြင်းမရှိနိုင်တော့သည်အထိ ပျက်စီးနေလောက်ပြီပျက်စီးနေလောက်ပြီ ဖြစ်သည်။
အသက် ၂၀ -၃၀ ကြား တွင် အသားအရေ ပြဿ နာများမှာမသိသာသေးပေ။ ယခုအရွယ်တွင်ခရင်မ်အမျိုးမျိုးလိမ်းကာအသားအရေထိမ်းသိမ်းသောထုတ်ကုန်များသုံးပြီး အရေပြားဆဲလ်များကို အောက်ဆီဂျင်နှင့်ဗီတာမင်များပိုမိုရရှိစေရန်ကုထုံးများ သို့မဟုတ် collagen ထုတ်လုပ်မှု ကို လှုံ့ဆော်ပေးသော လေဆာကုထုံးရယူခြင်းများကိုပါပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အသားအရေကိုထိန်းသိမ်းခြင်းများမှာ ထိရောက်မှု ရှိသည်။
အသက် ၃၀ – ၄၀ ကြား တွင် အရေးအကြောင်းများ ပိုမိုဖြစ်ပြီး အရေပြားစတင် တွဲ လာမည်ဖြစ်သည်။အထက်ပါဖော်ပြထားသောကုထုံးများအပြင်မျက်နှာရှိကြွက်သားငယ်လေးများအား လျှော့ပေးရန် Botulinum ထိုးခြင်း အပြင် အရေးအကြောင်းများအား လျှော့ချရန် filler ထိုးခြင်း တို့သည် ဤ အသက်အရွယ်တွင် အမြန်ဆုံး နှင့် အထိရောက်ဆုံးကုထုံးများဖြစ်သည်။
အသက် ၄၀ – ၅၀ ကြား တွင် အပေါ်ယံကြွက်သား aponeurotic စနစ် (SMAS) သည် စတင် တွဲလာပြီဖြစ်သည်။ Focused ultrasound သို့မဟုတ် DermoLift လုပ်ထုံး၊ Botulinum ထိုးခြင်း နှင့် filler ထိုးခြင်းတို့ဖြင့် ဆက်စပ်နေသောရေဒီယိုလှိုင်းနည်းပညာအားဖြင့်ဤ အသက်အရွယ်တွင် သိသာသောထိရောက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အသက် ၅၀ နှင့်အထက်အရွယ်တွင်အရိုးငြမ်းဖွဲ့စည်းပုံ မှာသဘာဝအတိုင်းစတင်ယိုယွင်းလာပါပြီ။ collagen နှင့် elastin တို့မှာ ယခင်ထက် ပမာဏ လျော့နည်းလာပြီး အရေးအကြောင်းပိုမိုဖြစ်စေပါသည်။ ဤအဆင့်တွင် Botulinum ထိုးခြင်းတစ်ခုတည်း ဖြင့်အသားအရေပြန်လည်ပင့်တင်တင်းရင်းစေနိုင်ရန်မလုံလောက်တော့ပါ။အရေပြား၏အတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုအားဖြည့်ပေးရန်ရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည့်’volume lift’ နည်းပညာကို အသုံးပြုသော filler ကိုပါထိုးသင့်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက အရေပြားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအတွက်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သောရလာဒ်များကိုပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ တဆင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်သော antioxidant များစွာပါဝင်သောသစ်သီးနှင့်အသီးအရွက်များစွာပါဝင်ပြီးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းသော မျှတစွာ စားသောက်မှုပုံစံဖြင့်စားသောက်ခြင်း၊ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း၊ အိပ်ရေးဝ လင်စွာအိပ်စက်ခြင်း၊စိတ်ဖိစီးမှုများအားလျှော့ချခြင်း၊အပေါ့အလေးပုံမှန်သွားပေးခြင်းဖြင့်အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုနှေးစေမည့်အပြင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်လည်အသစ်ပြုပြင်နိုင်ပြီးကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
အသက်၄၀ အရွယ်တွင် အရေးအကြောင်းများဖြစ်ခြင်း နှင့် အရေပြားတွဲခြင်းကို ရပ်တန့်စေခြင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အရေပြားမှာချောမွေ့တင်းရင်းပြီးနုပျိုဟန်ရှိစေရန်ဖိုင်ဘာအမျှင်မြောက်များစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။သို့သော်အသက်ကြီးရင့်လာခြင်းအပြင်စားသောက်မှုပုံစံ၊ နေရောင်ခြည်၊ စိတ်ဖိစီးမှု နှင့် မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း အပေါ်မူတည်ပြီး
User rating: 3.67 out of5with6ratings
Noppadol Amornpinyokeit, M.D.
M.D., (Honors) Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,